နောက်ဆုံးရ ချဲလ်ဆီးသတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၂.၉.၂၀၂၀ – Sports A2Z
နောက်ဆုံးရ ချဲလ်ဆီးသတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၂.၉.၂၀၂၀
–	ကွင်းလယ်လူ အန်ဂိုလို ကွန်တေဟာ အသင်းအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်လို အရေးပါတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး အင်တာမီလန်အသင်းက ကမ်းလှမ်းလာပေမယ့်လည်း ရောင်းချသွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ်ပြောကြား။
Edouard Mendy will be in London on next few hours – the deal is 100% done. Chelsea will consideramove for Declan Rice on following days but won’t pay €80m. West Ham insist they don’t want to sell Rice. Match on. Bakayoko is not in Lampard plans. 🔵 #CFC #Chelsea #WHUFC
–	အေဒူယာ မန်ဒီအတွက် ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ရင်းနေးအသင်းတို့ကြားမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၂၂ သန်းနဲ့ သဘောတူညီနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံး လန်ဒန်ကို လာရောက်ဆေးစစ်သွားဖို့ ရှိနေပြီး အင်္ဂလန်ရဲ့ ကွာရန်တင်းတွေနဲ့တော့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆို။
–	ဒက်ကလန် ရိုက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၈၀ ကို အပြည့်အဝ မပေးချေချင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ကြိုးစားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရော့စ် ဘာကလီကို အလိုက်ပေးပြီး ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဆီ ချဲလ်ဆီးကမ်းလှမ်းမယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာ။
–	အသင်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းအနေနဲ့ ကစားခွင့်နည်းလာနိုင်တဲ့ ပြဿနာကို အငှားထွက်ခွာခြင်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်း သွားရဖွယ်ရှိနေပြီး နည်းပြ လမ်းပတ်ကလည်း သူ့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ ခံယူချက်ကို မနှစ်သက်တာကြောင့် သင့်တော်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံသွားဖို့ရှိနေ။
–	ဒက်ကလန် ရိုက်စ်ကို လိုချင်နေခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ကို ဝက်စ်ဟမ်းဘက်က ရောင်းချလိုခြင်း မရှိတာကြောင့် တခြားပစ်မှတ်တွေကို ပြောင်းလဲစဉ်းစားဖွယ်ရှိနေပြီး အင်္ဂလန်သားအတွက် ခေါ်ဈေး ပေါင်သန်း ၈၀ ကို အသုံးပြုဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလို့ ရိုမာနိုထုတ်ဖော်။
–	ဂိုးသမားတစ်ဦးနဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှူးကောင်းတစ်ဦးကို ချဲလ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ကီပါ အာရီဇာဘာလာဂါနဲ့ သီယာဂို ဆေးလ်ဗားတို့ဟာ အဖြေမဟုတ်သေးကြောင်းနဲ့ အသင်းရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မယ့် ကစားသမားတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဂျေမီ ကာရေဂါ ဝေဖန်။
–	အင်္ဂလန်မြေကို ဒီရာသီမှာမှ စတင်ခြေချခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ တရားဝင်ပွဲတစ်ပွဲမှ မကစားရသေးပေမယ့် ဂျာမန်တိုက်စစ်မှူး တီမို ဗာနာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုကို ရယူနိုင်သူစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းပြီး ထင်ကြေးပေးခံနေရ။
–	ကှငျးလယျလူ အနျဂိုလို ကှနျတဟော အသငျးအတှကျ အခွခေံ အုတျမွဈလို အရေးပါတဲ့ ကစားသမားဖွဈပွီး အငျတာမီလနျအသငျးက ကမျးလှမျးလာပမေယျ့လညျး ရောငျးခသြှားဖို့ အစီအစဉျမရှိဘူးလို့ နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျပွောကွား။
–	အဒေူယာ မနျဒီအတှကျ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ရငျးနေးအသငျးတို့ကွားမှာ ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို ၂၂ သနျးနဲ့ သဘောတူညီနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပွီး အမွနျဆုံး လနျဒနျကို လာရောကျဆေးစဈသှားဖို့ ရှိနပွေီး အင်ျဂလနျရဲ့ ကှာရနျတငျးတှနေဲ့တော့ ရငျဆိုငျရဦးမှာဖွဈတယျလို့ဆို။
–	ဒကျကလနျ ရိုကျဈကို ချေါယူဖို့ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး ၈၀ ကို အပွညျ့အဝ မပေးခခြေငျြခဲ့ပမေယျ့လညျး ကွိုးစားမှုတဈခုအနနေဲ့ ကှငျးလယျလူ ရော့ဈ ဘာကလီကို အလိုကျပေးပွီး ဝကျဈဟမျးအသငျးဆီ ခြဲလျဆီးကမျးလှမျးမယျလို့ သတငျးထှကျပျေါလာ။
–	အသငျးရဲ့ လူငယျတောငျပံကစားသမား ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးအနနေဲ့ ကစားခှငျ့နညျးလာနိုငျတဲ့ ပွဿနာကို အငှားထှကျခှာခွငျးနဲ့ပဲ ဖွရှေငျး သှားရဖှယျရှိနပွေီး နညျးပွ လမျးပတျကလညျး သူ့ရဲ့ စိတျသဘောထားနဲ့ ခံယူခကျြကို မနှဈသကျတာကွောငျ့ သငျ့တျောတဲ့ ကမျးလှမျးမှုကို လကျခံသှားဖို့ရှိနေ။
–	ဒကျကလနျ ရိုကျဈကို လိုခငျြနခေဲ့ပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ပဈမှတျကို ဝကျဈဟမျးဘကျက ရောငျးခလြိုခွငျး မရှိတာကွောငျ့ တခွားပဈမှတျတှကေို ပွောငျးလဲစဉျးစားဖှယျရှိနပွေီး အင်ျဂလနျသားအတှကျ ချေါဈေး ပေါငျသနျး ၈၀ ကို အသုံးပွုဖို့တော့ စိတျကူးမရှိဘူးလို့ ရိုမာနိုထုတျဖျော။
–	ဂိုးသမားတဈဦးနဲ့ ဗဟိုခံစဈမှူးကောငျးတဈဦးကို ခြဲလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ လိုအပျနဆေဲဖွဈပွီး ကီပါ အာရီဇာဘာလာဂါနဲ့ သီယာဂို ဆေးလျဗားတို့ဟာ အဖွမေဟုတျသေးကွောငျးနဲ့ အသငျးရဲ့ အနာဂတျအတှကျ ရရှေညျအသုံးပွုနိုငျမယျ့ ကစားသမားတှေ လိုအပျနတေယျလို့ ဂမြေီ ကာရဂေါ ဝဖေနျ။
–	အင်ျဂလနျမွကေို ဒီရာသီမှာမှ စတငျခွခေခြဲ့ပွီး ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ တရားဝငျပှဲတဈပှဲမှ မကစားရသေးပမေယျ့ ဂြာမနျတိုကျစဈမှူး တီမို ဗာနာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ရှဖေိနပျဆုကို ရယူနိုငျသူစာရငျးမှာ ထညျ့သှငျးပွီး ထငျကွေးပေးခံနရေ။
နောက်ဆုံးရ လီဗာပူးလ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၂.၉.၂၀၂၀
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၂.၉.၂၀၂၀